Sarobidy ve ny karatra fitsangatsanganana karatra noho ny politika mahazatra?
Security & Insurance Insurance
Mety efa manana fiantohana fiantohana ny dia ianao nefa tsy fantatrao
Misy tombontsoa maro ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny fampiasana midadasika mankany amin'ny karatra famoahana avo lenta. Ankoatra ireo kilaometatra sy kilaometatra azo ampiasaina amin'ny karatra maro , ho an'ireo tombontsoa azo avy amin'ny karatra fiaramanidina, ny mpivarotra dia afaka manokatra tombontsoa lehibe amin'ny alàlan'ny fomba fandaniana azy. Na izany aza, dia maro amin'ireo mpanao dia tsy mahatsapa fa izy ireo koa dia afaka mamoha ny tombony azo antoka ho an'ny fiantohana amin'ny dia.
Rehefa mametraka ampahany amin'ny làlan-dàlana amin'ny carte de crédit, dia matetika ny mpandeha dia mahazo tombony amin'ny fiantohana ny fiantohana amin'ny alàlan'ny carte de crédit. Ireo tombontsoa ireo dia mety hampidirina soa aman-tsara amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana , ny faharetan'ny faharetan'ny saran-dalana , ary ny fandrakofam-barotra amin'ny faharetana Ankoatr'izany, ny karatra fiara dia afaka manitatra fiarovana amin'ny fiara mividy ihany koa, izay mamela ireo mpandeha handroaka ny saka amin'ny fiadanan-tsaina. Moa ve ny tombontsoa azo raisina amin'ny karatra karaara kokoa noho ny politikan'ny fiantohana amin'ny fiantohana?
Amin'ny fahatakarana ny fiheverana sy ny fiantraikan'ny politikan'ny fiantohana ara-barotra nentim-paharazana sy ny fiantohana amin'ny fitsangatsanganana nomen'ny carte de crédit, dia afaka manao ny fanapahan-kevitra tsara indrindra ho an'ny dia manaraka. Ireto misy làlana tena lehibe amin'ny fikarakarana ara-barotra nentim-paharazana dia tsy mitovy amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fiantohana amin'ny alàlan'ny carte de crédit.
Fialam-boly nentim-paharazana: mihoatra ny fanamafisana bebe kokoa
Rehefa mieritreritra ny tombontsoa amin'ny fiantohana ara-barotra nentim-paharazana ny ankamaroan'ny olona, ​​ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny mividy ny drafitra omen'ny mpanolotra dia, na ny fandehanana mpandraharaha iray hividy planina fiantohana fiantohana.
Ireo politikam-piantohana ireo dia afaka manome fiarovana maro ho an'ny mpizaha tany amin'ny toe-javatra ratsy indrindra.
Ny drafitry ny fiantohana nentim-paharazana dia manararaotra ny lanjan'ny fitsidihan'ny mpandeha iray, na inona na inona fandoavan'izy ireo ny zava-niainany. Amin'ny politika iray, ny mpandeha dia afaka mahazo fiarovana amin'ny lafiny rehetra amin'ny diany, manomboka amin'ny fiara mankany amin'ny seranam-piaramanidina, mandra-pahatongany any an-trano.
Ankoatra izany, ny politika iray dia midika fa ny mpandeha dia mila miantso ny laharana finday iray raha tsy mandeha tsara ny zava-drehetra: raha misy ny vonjy taitra, ny antso iray amin'ny mpamonjy voina dia ahafahana miantoka ny toe-draharaha.
Na izany aza, ny fitsipika momba ny fiantohana ara-barotra nentim-paharazana ihany koa dia misy fetra maro . Ireo tra-boina izay maratra na marary amin'ny toe-javatra mitaiza mialoha ny fialany dia tsy azo refesina amin'ny fiverimberenana ireo fepetra ireo raha tsy misy ny fepetra efa misy eo aloha , izay manome vola ho an'ny drafitry ny fiantohana fiantohana. Raha tsy toy ny karatra fiara, ny politikam-piantohana ara-barotra nentim-paharazana dia mety tsy mitaky fiara karakaraina na any an-trano na any ivelany, ka handao ny mpandeha mba hanonitra farafahakeliny. Farany, ny ankamaroan'ny fiantohana ara-pizaham-piarahamonina dia tsy mahafaoka ny vola lany amin'ny kilaometatra na kilaometatra, kanefa mety handoavana saram-pandaharana amin'ny fametrahana indray ireo hevitra ireo amin'ny kaonty fidirana.
Karama fampindramam-bola ho an'ny fiantohana ny karatra: natomboka tamin'ny dia, fa amin'ny lafiny iray
Angamba ny iray amin'ireo karatra ambany indrindra tsy voakitika dia mahazo tombony, maro ireo mpizaha tany vahiny no mahazo taratasy politika momba ny fiantohana mandeha amin'ny alàlan'ny banky famoahana banky. Ankoatr'izany, ny sasany amin'ireto fepetra fiantohana dia ireto dia afaka mifaninana na dia ny drafitra tsara indrindra aza.
Ny ankamaroan'ny tombon-tsoan'ny fiaramanidina dia manome ny tombontsoa azo ampiasaina, anisan'izany ny fanesorana ny fitsangatsanganana, ny fahatarana amin'ny fitsangantsanganana, ary ny faharetan'ny faharetan'ny entana, tsy mila mividy politika hafa.
Ankoatr'izay dia maro ny karatra fiantohana momba ny fiantohana amin'ny fiantohana karama no tonga miaraka amin'ny tsy fahafantarana ny fahafatesana sy ny fandrakofam- pahavitrihana izay manohitra politika marobe. Raha mieritreritra ny fiantohana ny fiaramanidina carte de crédit amin'ny ankapobeny ny ankamaroan'ny olona, ​​dia ny karatra sasany dia handrakotra ny lanjan'ireo teboka nafarana tamin'ny diany tamin'ny vidiny milamina.
Na dia mety ho ampy ho an'ny mpandeha aza ny tsy hividy drafitrasa fiantohana nentim-paharazana, dia zava-dehibe ny manamarika hoe tsy hivoaka ny politika fiantohana fiantohana. Maro ny karazana fiantohana fiantohana fitsangatsanganana dia manana fandrakofam-baovao fohy ho an'ny fitsaboana ara-pahasalamana sy fitsaboana ara-pahasalamana , izay midika fa ny mpandeha dia mety voatery mandoa vola amin'ny paosiny raha toa ka tapitra ny naratra rehefa mandeha. Faharoa, ny fiantohana fiantohana ny carte de crédit dia mety hizatra fotsiny amin'ny ampahany izay novidina tamin'ny karatra.
Raha nividy fiarandalamby sy fiara karetsaka roa ny mpandeha iray, dia nokarakarain'ny politika roa samy hafa izy ireo. Farany, mety tsy hanome fanampiana sarobidy fanampiny momba ny fandrakofana ny fiantohana fiantohana fitsangatsanganana carte de crédit, anisan'izany ny fanampim-panaovan-javatra mampidi-doza, ny fanampiana efa misy eo aloha, na ny fakana an-keriny noho ny antony hafa . Vokatr'izany, ireo mpandeha dia mety tsy hanadino ny tombontsoa mety ho azo tsapain-tanana amin'ny manaraka.
Raha toa ny mpandeha sasany dia mihevitra fa mitovy ny fiantohana ny dia, ny toerana izay ahazoany ny fandrakofany dia fanavahana lehibe amin'ny fahatakarana. Amin'ny fahatakarana ny fiheverana sy ny fiantraikan'ny fiantohana amin'ny fitsangantsanganana amin'ny alalan'ny fomba nentim-paharazana sy amin'ny karatra fiasan'izy ireo, dia afaka mitondra ny ankamaroan'ny tombony ny mpandeha.
Inona no fiantohana fiatrehana fitsangantsanganana?
Hahafoy ahy ve ny fiantohana fitsangantsanganana mandritra ny fotoanan'ny ady na ny korontana henjana?
Tandindomin-doza telo hitadiavana ny 2016
Inona no mety ho fiantraikan'ny fampihorohoroana ny drafitry ny fiantohana fitsangantsanganana?
Hery antoka momba ny rivo-doza
Karama telo karatra miaraka amin'ny tombontsoa goavambe goavana
Nekena tany Kanada ny vola Amerikana
Ianaro izay hanantenana ny kolontsaina sy ny fomban-drazana
Martin Luther King Events 2018 any Washington, DC
Historic Ellicott City, Maryland: Zavatra Hitadiavana sy Ataonao
Tanànan'i San Juan: Torolalana ho an'i Río Piedras
Tysons, VA Toeram-pivarotana lehibe: Hours, Directions & More
Hiantsena any Madrid
Toeram-pambolena sy ala any amin'ny alan'i Albuquerque